mairie-antananarivo – Fitsidihana toerana fanodinana diky nataon’ny CUA
Fitsidihana toerana fanodinana diky nataon’ny CUA
auteur 19 janoary 2017 Commentaires fermés
Nitohy ny fidinana ifotony nataon’ny Ben’ny Tanànan’ Antananarivo, Lalao Ravalomanana, sy ny mpiara-miasa taminy androany tetsy Mandrangobato boriborintany faha 4, nijery ny foto-drafitrasa vaovao fanodinana diky na tay ho lasa zezika sy BIOGAZ, ao anatin’ny tetik’asa FAMAFA ( Fanatsaràna ny farimpiainan’ny Mponina An-drenivohitra amin’ny Fandrindràna ny Fidiovana sy ny Fanadiovana ) izy tamin’izany. Nandrindra sy nanatanteraka ny tetik’asa tamin’izany ny CARE sy ny WSUP; ny kaominina Antananarivo Renivohitra kosa no tompon’ny Foto-drafitr’asa ary ny mpamatsy vola ny fotodrafitr’asa dia ny AFD sy ny UKAID.
Misy ny Orinasa miara-miasa amin’ny fampandehanana ny asa ao an-toerana : ao ny mpanara- maso ara-teknika sy mpanatanteraka (ARTELIA International sy RINDRA), eo koa ny mpiara- miombon’antoka ny fokontany Mandrangobato I, ny Association Fiombonana, RF2, ny fokontany, ary ny SAMVA no mitantana mpanome ny servisy (association des vidangeurs). Ny volana aogositra 2016 teo no nanomboka ny asa fanamboarana ity toerana fanodinana diky ity, ary efa azo ampiasaina amin’izao, marihina fa afaka manodina diky 2m 3 isan’andro io foto-drafitrasa io ary fokontany 9 no efa afaka mampiasa azy ao amin’ny boriborintany faha efatra sy voalohany ao Mandragombato.
Rehefa avy milona mandritra ny 27 andro ny diky dia voadio amin’ny 80% ny otrik’aretina , avela anaty dobo ny rano dia mitsika any ambany ny fotaka. Tsy vitan’izay ihany fa misy koa ny tombontsoa azo avy amin’ny fanodinana , ankoatra ny zezika afaka ampiasana hambolena , dia afaka mamokatra GAZ azo andrahoana sakafo sy angovo manazava, izay manana tanjaka 1KWH/m3.
Ny fisian’ny foto-drafitrasa koa dia anisany mitarika ny olona tsy hanary diky eny anelakelan-trano sy eny rehetra eny satria efa misy ny toby ao Mandrangobato mandray izany. Ny sarany aloa dia 4500 ar ny DIKY ao anatin’ny bidon 50 litatra. Misy ny fanentanana ho an’ny olona izay hiraha-miasa miaraka amin’ny kaominina sy ny CARE, WSUP toy fampafantarana ny « code d’hygiéne ». Hisy koa ny dinika izay mbola hiarahana mamolavola tsara eo amin’ny roa tonta ho entina hanatsarana ny asa hatrany hatrany. Tsiahivina fa ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana no nitarika ny fidinana androany niaraka tamin’ny kaominina niaraka tamin’ny Solombavabahoaka, ny CARE, WSUP, ny fonkontany Mandragobato, solontenan’ny Distrika.
Notohizana teny Soanierana indray avy eo ny fidinana ifotony. Nanao fanentanana ny mponina ny Ben’ny Tanana amin’ny fanadiovana ny toerana sy ny lalan-kely indrindra ho an’ireo mpanasa lamba ka nampanantena azy ireo ny Ben’ny Tanàna fa mila madio amin’ny manaraka ary mbola hidina eny an-toerana izy sy hizara savony ho an’ireo mpanasa lamba raha madio ny toerana. Tao anatin’izany koa no nijereny ny tetikasa lalan-kely ao anatin’ny tetik’asa CLD ao amin’ny boriborintany faha 4, tetsy Soanierana. Nandritra izany no nijereny ny olan’ny mponina mikasika ny resaka tsy fandriampahalemana sy ny fahasimban’ny fotodrafitr’asa iray miteraka loto ao an-toerana.